चीन कम गति प्लास्टिक Granultor निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Aumax
प्लास्टिक Granulator र श्रेडर
शक्तिशाली प्लास्टिक कोल्हू
भारी शुल्क प्लास्टिक Granulator
ध्वनिरोधी प्लास्टिक Granulator
यूरोपीय प्रकार प्लास्टिक Granulator
कम गति प्लास्टिक चक्की
मध्यम गति Granulator
ढिलो गति Granulator
प्लास्टिक पाइप र प्यालेट क्रशर
प्लास्टिक फिल्महरु र पानाहरु Crushers
पानी चिलर र कूलिंग टावर
एयर कूल्ड वाटर चिलर
पानी कूल्ड औद्योगिक Chiller
पेंच प्रकार पानी चिलर
पानी कूलिंग टावर
मोल्ड तापमान नियन्त्रक
पानी प्रकार मोल्ड तापमान नियन्त्रक
तेल प्रकार मोल्ड तापमान नियन्त्रक
प्लास्टिक मिक्सर र डोजर एकाई
ठाडो प्लास्टिक रंग मिक्सर
यूरो प्रकार भण्डारण रंग मिक्सर
ठूलो ठाडो प्लास्टिक मिक्सर
सामग्री आनुपातिक वाल्व
प्लास्टिक ड्रायर र हनीकम्ब Dehumidifier
सबै एक dehumidifying ड्रायर मा
अटोलोडर र कन्वेयर
स्वयं निहित भ्याकुम अटोलोडर
अलग वैक्यूम हपर लोडर
घर > उत्पादनहरु > प्लास्टिक Granulator र श्रेडर > कम गति प्लास्टिक चक्की > कम गति प्लास्टिक Granultor
प्लास्टिक कोल्हू मिसिन
Heany कर्तव्य प्लास्टिक कोल्हू
कम गति प्लास्टिक Granultor
मध्य गति प्लास्टिक Granulator
ढिलो गति प्लास्टिक Granulator
AMG-L श्रृंखला कम गति प्लास्टिक Granultor मिसिनहरु प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिन को छेउमा मोल्ड धावक sprue बर्बाद सामग्री र दोष उत्पादनहरु को लागी स्थापित गरीन्छ। ब्लोअर र चक्रवात प्रणाली संग सुसज्जित मिसिन तुरुन्तै इंजेक्शन मेशिन मा सामग्री ढुवानी गर्न को लागी।
1. कम गति प्लास्टिक Granultor परिचय
AMG-L श्रृंखला कम गति प्लास्टिक Granulator मेसिनहरु प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिन को छेउमा मोल्ड रनर स्प्रु बर्बाद सामग्री र दोष उत्पादनहरु को लागी स्थापित गरीन्छ। ब्लोअर र चक्रवात प्रणाली संग सुसज्जित मिसिन तुरुन्तै इंजेक्शन मिसिन मा कुचिएको सामग्री ढुवानी गर्न।
2.कम गति प्लास्टिक Granultor प्यारामीटर (निर्दिष्टीकरण)
काट्ने कोठा आकार
२5५x३५०
छलनी (मेष) आकार
५० ~ १००
~० ~ १५०
१०० ~ २००
१५० ~ २0०
60 ~ 75
छिटो रिसाइकिलिंग को लागी चक्रवात
कृपया नोट गर्न को लागी माफ गर्नुहोस् यदि उत्पादनहरु को केहि विशिष्टताहरु परिवर्तन गरीएको छ।
1ï¼ ‰ सी प्रकार पंजा घुमाउने ब्लेड मानक प्रकार हो।
2ï¼ ‰ अधिकतम कुचल उत्पादन स्क्रीन व्यास, सामाग्री गुणस्तर र खुवाउने आवृत्ति मा निर्भर गर्दछ।
3) पर्दा जाल व्यास customersâ â ™ अनुरोध अनुसार गर्न सकिन्छ।
4ï¼ running चलिरहेको शोर विविध shredding सामग्री मा निर्भर गर्दछ।
5ï¼ ‰ मानक बिजुली आपूर्ति 3Ø380V 50Hz छ। अन्य बिजुली आपूर्ति उपलब्ध छ।
3. कम गति प्लास्टिक Granultor सुविधाहरु र आवेदन
1. नोजल सामग्री कुचल र रिसाइकिलिंग मिसिन श्रृंखला, विशेष रूप बाट कुचल र पुनर्चक्रण फोहोर उत्पादनहरु र प्लास्टिक मोल्डिंग प्रक्रिया मा उत्पन्न गेटहरु को लागी डिजाइन गरीएको;
2. सामग्री कुचल गर्न को लागी फीडिंग हपर को माध्यम बाट खुवाइएको छ। बिभिन्न कुचल सामाग्री अनुसार, त्यहाँ बाट छनौट हप्पर को एक किस्म छन्;
विभिन्न उपयोगहरु को अनुसार, नोजल सामग्री कुचल र रिसाइकिलिंग मिसिन श्रृंखला पनि वैकल्पिक स्थापना को बाटो मा विकल्प को एक किस्म छ। तपाइँ एक रीसाइक्लिंग प्रणाली संग एक ब्लोअर खुवाउने संग तत्काल रिकभरी विधि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाइँ एक सक्शन ट्यांक र ब्यागि equipped संग सुसज्जित हुन सक्नुहुन्छ। इन्टरफेस को उपयोग र विविध मिलान विधिहरु कम गति कोल्हू श्रृंखला को उपयोग को एक धेरै विस्तृत श्रृंखला छ, र ग्राहकहरु को लागी बिभिन्न अनलाइन कुचल समाधान को समाधान बनाउन;
4.Nozzle सामग्री कुचल र रिसाइकिलिंग मेशिन सामान्य मध्यम गति crushers, जस्तै कम आवाज र कम धूल, र यसको डिजाइन मा राम्रो प्रदर्शन, जस्तै कटर विशेष गरी फोहोर र गेट्स को लागी डिजाइन गरीएको को सामान्य लाभ को संयोजन गर्दछ। रोटर, छिटो disassembly विधि, सानो मौन मध्यम गति तटस्थ पीपी प्लास्टिक चक्की को humanization embodies;
5. मेशिन एक reducer प्रसारण मोड अपनाउँछ, र टोक़ थपिएको छ, मेशिन कुनै पनी समय मा शुरू गर्न सकिन्छ, भलेपनि त्यहाँ कुचल गुफा मा बाँकी रहेका सामग्री छन्, मेशिन सजीलै संग शुरू गर्न सकिन्छ।
4. कम गति प्लास्टिक Granultor विवरण
AMG-L श्रृंखला प्रेस कम गति granulator को छेउमा इंजेक्शन मोल्डिंग मिसिन को छेउमा राखिएको छ र नोजल प्लास्टिक सामग्री को रीसायकल गर्न को लागी राखिएको छ, जो धेरै उत्पादन लागत घटाउँछ। एकै समयमा, नोजल सामग्री र बचेको सामग्री पर्यावरण संरक्षण प्राप्त गर्न को लागी पुनर्नवीनीकरण गरीन्छ; यदि पुनर्चक्रण उपकरण एक रोबोट सञ्चालन संग सुसज्जित छ, यो आवश्यक म्यानुअल अपरेशन छैन, जबकि श्रम लागत बचत। मेशिन साइड मध्यम गति कोल्हू क्रश र प्लास्टिक स्क्रैप, पुनर्नवीनीकरण सामग्री, र अर्द्ध तैयार उत्पादनहरु सहित विभिन्न प्लास्टिक सामाग्री, पुन: उपयोग को लागी उपयुक्त छ। यो विभिन्न नरम र कडा पाना प्लास्टिक जस्तै नरम क्लोरीन, polycarbonate, नायलॉन, ABS, आदि, शाखा आकार, मेष प्लास्टिक को लागी उपयुक्त छ। मेशिन संरचना मा कम्प्याक्ट छ, उपस्थिति मा सुन्दर, र संचालित गर्न सजिलो। घुमाउने चाकू को अनुकूलित डिजाइन ऊर्जा को खपत कम गर्दछ र दक्षता काटने बढ्छ।
5. कम गति प्लास्टिक Granultor योग्यता
Aumax प्लास्ट आर एण्ड डी मा ध्यान केन्द्रित गरी रहेको छ र प्लास्टिक रीसाइक्लिंग मेसिन र इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिन को लागी सहायक उपकरण को निर्माण, मोल्डिंग मिसिन र प्लास्टिक एक्सट्रूज़न लाइन भन्दा बढी 15years को लागी।
हामीले IS09001, ISO14001, CE, आदि जस्ता बिभिन्न घरेलु र विदेशी प्रमाणपत्रहरु प्राप्त गरेका छौं, जुन पुरा तरिकाले देखाउँछ कि हाम्रा उत्पादनहरु लाई पुरा तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु संग अनुपालन र उत्पादनहरु को गुणवत्ता को ग्यारेन्टी छ।
6. वितरण, ढुवानी र सेवा
सामान्यतया, हाम्रो प्लास्टिक मिसिनहरु को वितरण समय १०-२० दिन अर्डर पुष्टि र अग्रिम भुक्तानी पछि हो। हाम्रा उत्पादनहरु को अधिकांश प्लाईवुड मामलाहरुमा प्याक गरीन्छ। भ्याकुम Autoloaders जस्तै साना मिसिनहरु को लागी नालीदार अवस्थामा प्याक गरीन्छ। सामान्यतया, हामी LCL वा FCL महासागर ढुवानी द्वारा ठूला मिसिनहरु जहाज। कहिलेकाँही, ग्राहकहरु लाई तत्काल मेशिन को आवश्यकता छ, हामी हावा वा एक्सप्रेस बाट मेशिन जहाज।
7. सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: MOQ के हो?
A: MOQ सबै उत्पादनहरु को लागी १ सेट छ।
२. प्रश्न: कहाँ लोड बन्दरगाह छ?
A: हाम्रो कारखाना को निकटतम बन्दरगाह Ningbo, चीन को बन्दरगाह हो, साथै हामी Yiwu, शंघाई, गुआंग्डोंग वा चीन मा कुनै अन्य शहरहरुमा मेशिन पठाउन सक्छौं।
3. प्रश्न: भुक्तानी सर्तहरु के हो?
A: अधिमान्य भुक्तानी अवधि T/T हो, जबकि अन्य भुक्तानी शर्तहरु कुराकानी योग्य छन्।
4. प्रश्न: तपाइँको वितरण को शर्तहरु के हो?
A: हामी एफओबी, CFR, CIF, EXW, र DDU स्वीकार गर्दछौं। तपाइँ सर्तहरु छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई सबैभन्दा सुविधाजनक र लागत प्रभावी छ।
5. प्रश्न: तपाइँको कारखाना कसरी गुणस्तर नियन्त्रण बाहिर गर्छ?
A: शक्तिशाली आर एण्ड डी टीमहरु र पेशेवर QC विभाग डिजाइन, प्रशोधन, भेला, परीक्षण र प्याकिंग को समयमा हरेक विवरण को ख्याल राख्छन्।
6 प्रश्न: तपाइँ OEM र अनुकूलित उत्पादनहरु आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: हो, हामी OEM / ODM सेवा आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा ईन्जिनियरहरु डिजाइन र प्लास्टिक सहायक उपकरण को उत्पादन मा धनी अनुभव छ। हामी तपाइँको विचारहरु र चित्र को अनुसार विशेष उत्पादनहरु आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ।
7. प्रश्न: वारंटी सर्तहरु को बारे मा के?
A: हामी हाम्रा सबै उत्पादनहरु को लागी एक बर्ष वारंटी प्रदान गर्दछौं। वारेन्टी अवधि को दौरान, यदि कुनै मेशिन को भागहरु गुणस्तरीय को कारण क्षतिग्रस्त, हामी कूरियर द्वारा तुरुन्तै नि: शुल्क द्वारा नयाँ भागहरु पठाउनेछौं। साथै, हामी २४ घण्टा अनलाइन सेवा र प्राविधिक सहयोग आपूर्ति।
हट ट्याग: कम गति प्लास्टिक Granultor, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, अनुकूलित, चीन, गुणस्तर, सीई, उन्नत, किन्नुहोस्, मूल्य
ठेगाना: नम्बर २१6, Lianhe Rd।, Ningbo आर्थिक र टेक विकास क्षेत्र, Beilun, Ningbo, चीन
प्रतिलिपि अधिकार 21 २०२१ Ningbo Aumax प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड सबै अधिकार सुरक्षित